साङ्लाले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? लौ हेर्नुस साङ्ला भगाउने घरेलु उपाय « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
साङ्लाले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? लौ हेर्नुस साङ्ला भगाउने घरेलु उपाय
के तपाइको घरमा साङ्ला सताएर हैरान हुनुहुन्छ । अब चिन्ता नालिनिहोस् हामीले यसको सरल उपाए तपाईलाई दिदै छौं ।सामान्यतया घरमा ओसको मात्रा बढी हुँदा साङ्लाहरुलाई रहन वा बच्न सहज हुन्छ । साङ्लाहरुको आवास भनेकै भान्साको आसपास खाने कुरा भएको ठाउमा नै हुने गर्दछ ।
बजारमा साङ्ला भगाउन भनौ या मार्नका लागि बजारमा अनेक तरहका रसायनिक औषधि पाइन्छन् । तर, यी औषधीहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । यदि घरमा साना बच्चा छन् भने रासायनिक औषधि होइन, घरेलु उपाय नै अपनाउनु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन्छ ।
साङ्ला मार्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको साबुनपानी हो । साबुन या स्याम्पुको झोलले सबैभन्दा छिटो र सजिलो किसिमले साङ्ला मर्दछन् ।साङ्लाको शरीरमा साबुनको झोल परेपछि यसले बाहिरबाट हावा लिन पाउँदैन ।
के, कसरी गर्ने त ?
एउटा भाँडोमा नुहाने साबुनको झोल तयार गर्ने । स्याम्पु मिसाउँदा पनि हुन्छ । सांग्लाहरु भएको स्थानमा यो झोल छर्किने । सांग्लाहरु भाग्न नपाउन भनेर चारीतिर झेलको अलि चौडा घेरा बनाउँदा पनि हुन्छ ।
अब यो झोल सांग्लामाथि छर्किने । सांग्ला भाग्न खोज्छन् । केही मर्छन् । भाग्न खोजेका सांग्लामाथि यो झोल छर्किँदै जाने । लुगा धुने साबुन भन्दा नुहाने साबुन डिटोलको झोलले यो छिटो मर्दछन् । यस बाहेक अन्य उपायहरु यसप्रकार छन् ।
हामीले मट्टीतेलको प्रयोगद्वारा पनि साङ्लाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । तर, यो प्रज्वलनशील पदार्थ भएकाले प्रयोग गर्दा निकै सावधानी र सजगता भने अपनाउनु पर्ने जरुरी रहन्छ । भान्सालाई सधै ओसमुक्त पर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् ।
साङ्ला रहनको लागी ओसिलो ठाउँ अतिनै अनुकूल मानिन्छ । त्यसैले पनि हजुरले आफ्नो भान्सा कोठालाई ओसमुक्त राख्नुभयो भने पनि साङ्लाबाट केही हदसम्म भएपनि राहत हुन्छ।
आइपीएल खेलेपछि विश्वकै नजरमा परेका संदिप लामीछाने यसरी गायक बनेर चम्कदै, उनको स्वरमा रहेछ जादु हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं । लोकप्रिय क्रिकेटर सन्दिप लामीछानेले खेलको माध्यमबाट मात्र होइन अब गायनबाट पनि चर्चीत बन्दैछन्
शक्ति गौचनको सन्याससँगै नेपाली क्रिकेट टोलीलाई गरियो विदाइ, बेलायतमा नेपालको प्रतिस्पर्धी को ?
बेलायातको लर्ड्समा हुने एमसीसी, नेदरल्याण्ड् सम्मलित त्रिकोणात्मक श्रृखंला र नेदरल्यान्ड्विरुद्ध हुने एक दिवसिय अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट
बन्द अवस्थामा रहेको जुटमिलमा कर्मचारीले लगाए ताला
विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत १० कर्मचारी निष्कासनको विरोधमा आज कर्मचारीले प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन् ।बन्द
International Olympic Committee, IOC, President Thomas Bach from Germany, and the other board members stand